Fifanakalozana : Niakatra 4 000 Ariary ny Euro iray -
AccueilSongandinaFifanakalozana : Niakatra 4 000 Ariary ny Euro iray
Fifanakalozana : Niakatra 4 000 Ariary ny Euro iray
Niakatra ny sandan’ny vola vahiny tamin’ity herinandro ity. Raha ny hita omaly, tafakatra 4 000 Ariary ny Euro iray, raha toa ka, 3 420 Ariary ny Dolara Amerikana iray. Ho an’ny mpahay toe-karena, efa voatily mialoha io tranga. Antony, dia ao anatin’ny vanim-potoana fanafarana entana isika amin’izao ankatoky ny fetim-pirenena izao. Izany hoe, manakalo vola avokoa ny ankamaroan’ireo mpandraharaha ara-barotra. “Mbola hiakatra hatrany amin’ny 4 100 Ariary sy 4 200 Ariary io. Raha toe-karena ranoray no jerena mantsy dia hiakatra ny fangatahana vola vahiny, satria hitombo ny fanafarana entana amin’izao ankatoky ny fety izao. Izay dia hisy fiantraikany amin’ny fiainana andavanandron’ny olona sy ny toe-karena Malagasy, satria rehefa tonga avy any ivelany ilay entana dia tsy hitovy intsony ny vidiny nividiananao entana tamin’ny taona lasa na dia zavatra nitovy ary. Izany hoe, ho lafo kokoa mihoatra ny teo aloha ka hihena ny fahefa-mividin’ny Malagasy”, hoy ny filohan’ny CREM Madagascar, Ratobisaona Rado Andriamahenintsoa.
Hisy fiantraikany eo amin’ny vidin’ny solika ihany koa izany, araka ny fanazavana voaray hatrany satria tsy maintsy haloan’ny mpandraharaha ara-tsolika ny elanelam-bidy ka mazava ho azy fa hampakatra ny vidin’ny solika. “Fa zavatra natao amin’izao, aleo tsy ampakarina satria misy fiantraikany goavana eo amin’ny sosialim-bahoaka ka niezaka nitazona ny vidin’ny solika ny mpandraharaha”, hoy hatrany ny fanazavana. Fa eo amin’ny lafin’ny politika no mety hiteraka olana, araka ny fanazavan’ny filohan’ny CREM Madagascar. Izany hoe, eo amin’ny fahatokisan’ilay governemanta mitsangana amin’izao fotoana izao satria io mety mahatonga ny toe-draharaha ara-toekarena. “Azon’ny olona hitokisana ve io governemanta mitsangana io sa hitazona ilay vidin’entana amin’izao fotoana izao? Io rehetra io no mipetraka ao anatin’ny sain’ny tsirairay avy ka mety hahatonga azy handefa mialoha ny zavatra mety hitranga. Misy hanao tombatombana raha hitany fa metimety dia tsy hanangona entana, fa raha mifanohitra amin’izay dia misy hanangona entana sy hanangom-bary indray dia tsy ho hisy indray ny vary eny an-tsena ka hiakatra”, hoy hatrany Ratobisaona Rado. Tokony hojerena izany ny toe-draharaha politika eo amin’ny fifandraisana amin’ny fanakalozana volantsika sao vao mainka hampitontongana ny ariary, satria raha vao tsy marin-toerana ny toe-draharaha politika dia mihena be ny toe-draharaha ara-ekonomika.